Fanadiovana ny tanàna : nesorina ny kiosque teny Behoririka | NewsMada
Fanadiovana ny tanàna : nesorina ny kiosque teny Behoririka
Mitsanga tsy mahazo fahazoan-dalana ny « kiosque » maromaro eto Antananarivo. Nandrava ny tetsy behoririka ny kaominina omaly.
Nanala ireo tsena vita amin’ny takela-by « kiosque » niorina tsy ara-dalàna, teny Behoririka, omaly ny kaominin’Antananarivo. Niorina tamin’ny toerana ho an’ny daholobe ilay « kiosque », manoloana ny EPP Behoririka, ary tsy manana fahazoan-dalana avy amin’ny kaominina Antananarivo renivohitra velively ny fisokafany, raha ny fanazavana.
Mifanaraka amin’ny didim-pitondrana monisipaly laharana 669 nivoaka ny 4 aogositra 2015 mikasika ny fanadiovana ny tanàna sy ny fandaminana ny tsena no nanesorana izany.
Ny 14 marsa tokony ho tamin’ny misasak’alina, naheno feo nidoboka ny manodidina ary nampandre ny talen’ny EPP rehefa nahita ilay « kiosque » miorina.
Nampahafantatra ny mpitandron’ny filaminana manao fitiliana amin’ny alina ny momba an’ilay fanorenana tsy nahazon-dalana ny tale. Nandray fepetra avy hatrany ka nidina vao maraina teny an-toerana hijery ny zava-misy ny Kaominina Antananarivo Renivohitra, rehefa naheno izany.
Teny an-toerana, nilaza ny tompon’ny “kiosque” fa tsy manana taratasy fahazoan-dalana ka nanaiky ny hanala ilay fotodrafitrasa. Nanamafy ny tsy fisian’ilay fazahoan-dalana ihany koa ny filoham-pokotany izay tonga teny an-toerana.
Tsy eny Behoririka ihany fa betsaka ny “kiosque” miorina fahatany manelingelina ny fifamezivezen’ny mponina. Voakasik’izany ny eny 67 Ha sy ny manodidina. Mila fanaraha-maso akaiky ireny mba hanafoanana ny gaboraraka.